Amabhuloho aseRoma adumile, ukusuka e-Alcantara kuya eRoma | News Travel
amabhuloho aseRoma adumile
Luis Martinez | | Ukuphunyuka eYurophu, Iziqondiso
Kukhona eziningi amabhuloho aseRoma adumile kulo lonke elaseYurophu. Eqinisweni, amaLatins ayengonjiniyela abakhulu futhi akha izindawo zokuwela imifula esezithathe amakhulu eminyaka. Ngenxa yobuchwepheshe bakhe, sisajabulela ukubona la mabhuloho emadolobheni amaningi namuhla. Futhi ezinye zazo zisasetshenziswa.
Ngokunengqondo, ingxenye enhle yalezi zakhiwo itholakala esikhathini samanje Italia. Kodwa kukhona nezinkulu kwezinye izindawo ezazingaphansi ukubusa kwamaRoma, ngaphandle kokuqhubeka, España. Nasezweni lethu bayalondoloza imisele yamanzi njengaleyo eseSegovia noma izinsalela zezinye izakhiwo zesiLatini ezifana ne I-Amphitheatre yaseTarragona kanye namadolobha wonke afana nawo I-Hispalis Seville. Kodwa ngaphandle kokuqhubeka kwesikhathi, ake sikhulume ngamabhuloho aseRoma adumile. Futhi, endaweni ngayinye lapho bekhona, sizothatha ithuba lokuthatha uhambo olufushane lwezinye izikhumbuzo zabo.
1 Ibhuloho laseRoma lase-Alcantara
2 IPont du Gard de Nîmes
3 ibhuloho le-trier
4 ibhuloho letshe le-verona
5 I-Aelian Bridge
6 Ibhuloho laseTiberius
7 Ibhuloho laseRoma laseMerida
Ibhuloho laseRoma lase-Alcantara
Siqala uhambo lwethu lwendawo mhlawumbe edume kakhulu eSpain. Leli ibhuloho i-Alcántara, elisedolobheni laseCáceres elinegama elifanayo Umfula iTagus. Yabhalwa cishe ngonyaka we-103 emva kukaKristu futhi isagqama nanamuhla ngobuhle bayo.
Yakhiwe ngamakhothamo angama-semicircular ayisithupha ezindaweni eziphakeme ezihlukene. Ngokulandelayo, lezi zihlelwe phezu kwezinsika ezinhlanu ezinezinqe eziphakeme. Futhi, maphakathi yesikhulumi yayo uzobona Le yindawo ka Trajan futhi ekungeneni kwayo ohlangothini lwase-Alcántara kunethempeli elincane. Uzomangala ngesimo sayo esiphelele sokongiwa kwemvelo. Nokho, selibuyiselwe izikhathi eziningana.
Lesi sakhiwo sasiyingxenye ye nge Norba, exhumanisa indawo ne I-Lusitania futhi, ngokulandelayo, waxhumana lokhu nababaluleke kakhulu Via de la Plata. Ibhuloho licishe libe ngamamitha angamakhulu amabili ubude futhi licishe libe ngamamitha angamashumi ayisithupha ukuphakama.
Ngakolunye uhlangothi, njengoba use-Alcántara, sikweluleka ukuthi uphinde uvakashele Ibhuloho laseSegura, futhi kusukela ezikhathini zamaRoma, nakuba ethobekile kakhulu kunangaphambili. Kumele futhi ubone amabandla ka I-Santa Maria de Almocovar futhi of ISan Pedro de Alcantara, eyakhiwa ngekhulu leshumi nambili neleshumi nesikhombisa ngokulandelana. Kodwa, ngaphezu kwakho konke, ungakhohlwa ukuvakashela inqaba nendawo ebiyelwe kuyokanye nokumangalisayo I-Convent yaseSan Benito, negalari yayo ebabazekayo kaCarlos V kanye nendawo yayo yokuhlala.
IPont du Gard de Nîmes
Idolobha laseFrance Nimes Kwakuyidolobha laseRoma elibalulekile. Ithathwe amaLatins cishe ngonyaka we-120 BC, ayiguqula yaba isikhungo esibalulekile sokuxhumana. Ukwakhiwa kwePont du Gard kuwela ngaphakathi kwalo mongo.
Ilukuluku layo eliyinhloko liwukuthi akukona ukwakhiwa okuzimele, kodwa kwakha ukuhlangana nokubeka amanzi owaletha amanzi emzini. Yakhiwa ngekhulu lokuqala ngemva kukaJesu Kristu futhi ithola igama layo emfuleni ewusindisayo. Icishe ibe ngamamitha angamakhulu amathathu ubude futhi icishe ibe ngamamitha angamashumi amahlanu ukuphakama futhi ihlelwe emazingeni amathathu.
Njengelukuluku, sizokutshela ukuthi lakhiwe ngaphandle kokusebenzisa udaka. Amatshe aso, anesisindo esingamathani ayisithupha, ahlanganiswe yinsimbi. Eqinisweni, kwakuwumsebenzi wobunjiniyela oyinkimbinkimbi owawudinga isikafula esiyinkimbinkimbi ukuze sisekele isakhiwo ngenkathi sisakhiwa. Nokuhlanganyela kwabasebenzi abacishe babe yinkulungwane.
Ngakolunye uhlangothi, njengoba use-Nimes, ungakhohlwa ukuvakashela ezinye izikhumbuzo zenkathi yamaRoma. Phakathi kwabo, i Arena noma i-amphitheatre, eyakhiwe eminyakeni efanayo nebhuloho. Futhi futhi UMaison Carree, ithempeli eliwumbukwane, kanye I-Magna Tower, Okuyinto kwaba ingxenye yodonga futhi itholakala eNtabeni Cavalier.
Ekugcineni, sikweluleka ukuthi ubone i- I-Cathedral Basilica ye-Our Lady kanye ne-Saint Castor, igugu lamaRoma (nalo linezingxenye zesiGoth) elakhiwa, ngokunembile, ethempelini elidala lesiLatini.
Elinye lamabhuloho aseRoma adume kakhulu: Trier
Leli bhuloho laseRoma yilona elidala kunawo wonke eJalimane, njengoba lisedolobheni lase I-Trier, etholakala esifundeni sase-Rhineland-Palatinate. Iwela umfula iMoselle futhi ifuna ukwazi ukuthi ingeyesithathu eyakhiwa lapho ngezikhathi zesiLatini. Phambilini bekunamanye amabili adilizwa kwakhiwe leli esilethula kini.
Ihlezi phezu kwama-pilaster aqinile, iyakha, kanye nezinye izikhumbuzo edolobheni, iqembu lamemezela iNdawo Yamagugu Omhlaba. Phakathi kwalokhu, ungabona futhi kusukela ezikhathini zamaRoma njenge Inkundla yezemidlalo, the Amabhavu Wobukhosi noma i I-Porta Nigra. Kodwa futhi kamuva njengokubeka ISanhedro Cathedral noma ibandla leNkosazana Yethu.
Akumangalisi ukuthi iTrier yayingenye yezinhloko-dolobha zalezo ezibizwa ngokuthi ubutetrarchy. Lokhu kwadalwa uDiocletian ukuze ahole uMbuso WamaRoma ekhulwini lesithathu ngemva kukaKristu. Futhi ithola lelo gama ngoba yayinababusi ababili abakhulu noKhesari ababili abancane.
ibhuloho letshe le-verona
I-Verona Stone Bridge
Ngokunengqondo, uma sikhuluma ngenkathi yesiLatini, njengoba besisho, amabhuloho amaningi adumile aseRoma atholakala. Italia. Lesi yisimo sebhuloho letshe laseVerona, elakhelwe ukuzulazula Adige river. Ilinganisa amamitha angamashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu ubude namamitha amane ububanzi futhi inama-arcade amakhulu amahlanu.
Ezikhathini zamaRoma, iVerona yayinamabhuloho ayisikhombisa, nakuba itshe kuyilona lodwa elisele. Kodwa-ke, idolobha laseVeneto likunikeza ezinye izimangaliso eziningi. Ngokwesibonelo, ithiyetha yaseRoma kanye ne-amphitheatre, kusukela ngekhulu lokuqala BC noma isigodlo san san pedro. Ngokufanayo, ungavakashela okuhlaba umxhwele ICathhedral, embozwe ngemabula emhlophe nebomvana; i i-lamberti tower, kusukela ezikhathini zasendulo, noma ezidumile I-Basilica yaseSan Zeno.
Kodwa-ke, i-Verona ixhunywe unomphela Romeo noJuliet. Indlu yakamuva nayo ingavakashelwa, ne-balcony yayo edumile, nakuba iqiniso liwukuthi, kulokhu, umlando wayo usekelwe enhlanganisela yefantasy neqiniso.
I-Aelius Bridge eRoma
Phakathi kwamabhuloho amaningi esiLatini eliwagcinayo amaRom lena, mhlawumbe, eyaziwa kakhulu futhi, ngaphandle kokungabaza, enye yezinto ezimangalisa kakhulu. Obeye aziwe njengo Sant Angelo bridge ngoba yakhiwe ukuze ifinyelele esigodlweni esingaziwa.
Ngenxa yalokho, zombili lezi zakhiwo zagunyazwa umbusi Adriano ekhulwini lesibili emva kukaKristu. Iphinde ibe nama-arcade amaningana, kodwa okuhlaba umxhwele kakhulu ngayo ukuthi imbozwe ngemabula ye-travertine. Iphinde ibe nezithombe eziningana zezingelosi emaceleni ayo e-balustrade.
Okwamanje, ihamba ngezinyawo futhi ikunikeza ukubukwa okuhle kakhulu, ngokunembile, kwe inqaba yaseSanta Angelo. Kunoma ikuphi, njengoba besisho, ingelinye lamabhuloho amaningi aseRoma eDolobheni Laphakade. Siphinde sikweluleka ukuthi ubone i- Cestius bridge, the Emilio, the UFabricio futhi, ngaphezu kwakho konke, i I-Neronian, ehlanganisa i-Champ de Mars neVatican futhi iyamangalisa.
Manje siyahamba siya edolobheni URimini ukukutshela ngeBhuloho laseTiberius, elaqedwa ngekhulu lokuqala ngemva kukaKristu ngaphansi kwegunya lombusi oliqamba igama. Wavuselwa ukusindisa i-marequia river ngetshe elivela e-Istria, nakuba libonakala liqinile kunamanye amabhuloho aseRoma.
Inamakhothamo amahlanu angama-semicircular kanye nemigwaqo emibili edumile yangaleso sikhathi eyaqala kuyo: u-Emilia, okwaholela ePiacenza, kanye i-popilia, owayeya eRavenna. Njengakwamanye amadolobha, leli bhuloho akulona ukuphela kwesikhumbuzo samaRoma eRimini. Ungavakashela futhi inkundla yemidlalo, kusukela ekhulwini lesibili emva kukaKristu, kanye IKhothamo lika-Augustus, owawunesithombe sethusi esiwumbukwane salo mbusi ngeshwa sabhujiswa.
Ngokufanayo, i-Rimini ikunikeza ezinye izikhumbuzo ezinhle njenge Ithempeli laseMalatesta, igama elinikezwe isonto lombhishobhi ngoba lakhiwe kabusha uSegismundo Malatesta, kanye inqaba yokuzamazama komhlaba, eyangekhulu leshumi nanhlanu.
Ibhuloho laseRoma laseMerida
Ucezu lwebhuloho laseRoma laseMérida
Sikhethe ukuqedela ukubuyekezwa kwethu kwamabhuloho adumile aseRoma atholakala kuwo Merida, idolobha elinesiko lesiLatini elihlaba umxhwele. Ayingaphansi kwamamitha angu-790 ubude futhi inama-arcade angama-60. Yakhiwa ngekhulu lokuqala ngaphambi kukaKristu ukuwela Umfula iGuadiana.
Ukukunikeza umbono wobungcweti bobunjiniyela bamaRoma, sizokutshela ukuthi yakhiwe kwenye yezindawo lapho umfula ungashoni khona. Kuze kuzuze isiqhingi semvelo futhi phansi kwakhiwa ama-diorite, anikeza isisekelo esiqinile sesakhiwo.
Leli bhuloho liyingxenye ye I-Archaeological Ensemble yaseMérida, ejabulela isigaba se-World Heritage. Phakathi kwezimanga ezakhayo kubalwa inkundla yemidlalo, the isekisi, the imisele yaseLos Milagros, the ithempeli likaDiana noma i Le yindawo ka Trajan.
Kodwa, mhlawumbe, igugu elikhulu lesethi yilona Inkundla yaseshashalazini yamaRoma, elakhiwa ngonyaka we-15 ngaphambi kukaKristu ngokwezindinganiso zezakhiwo ze I-Vitruvian. Kuyathakazelisa ukuthi ayizange itholakale kwaze kwaba sekuqaleni kwekhulu leminyaka elidlule. Phakathi naleso sikhathi, lase limbozwe wumhlaba. Kodwa-ke, namuhla, ngemva kokuvikelwa ngokufanelekile, isabamba i- I-Classical Theatre Festival wedolobha laseMérida.
Sengiphetha, sikubonise amanye amabhuloho adumile aseRoma asamile. Siphinde sakukhombisa amanye amatshe esikhumbuzo ongawabona emadolobheni atholakala kuwo. Nokho, akhona amanye amabhuloho afanele ukuvakashelwa. Ngokwesibonelo, lokho kwe Salamanca noma lokho kwe I-Cangas de Onís, ngaphandle kokusuka eSpain. Futhi, ngaphandle kwezwe lethu, i ye-Eurymenton edolobheni lasendulo lamaGreki i-Aspendos, i- kwe-mysis edolobheni laseTurkey i-Adana noma ngu-Aquae Flaviae, ngesiPutukezi Chaves. Akumangalisi yini ukuthi lezi zimangaliso ziye zasinda amakhulu eminyaka amaningi kangaka?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » amabhuloho aseRoma adumile
Yini ongayibona eSaint Malo, eFrance
Umlando weBlue Mosque e-Istanbul